5 Tsy ampy tanàna be olona Explore any Frantsa | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Frantsa > 5 Tsy ampy tanàna be olona Explore any Frantsa
(Last Nohavaozina: 29/10/2021)
Frantsa dia malaza noho ny fizahan-tany hidirana ny tanàna tsara tarehy sy malaza mari-toerana. Ny firenena dia a toerana nofinofy malaza manerana izao tontolo izao noho ny tsy mampino ny kolontsaina sy ny sakafo matsiro. Raha maro ny mpizaha tany mirohotra ho any Paris, ny tanàna matetika mety ho tena feno olona loatra, indrindra fa amin'ny fahavaratra. Soa ihany, Frantsa manana toy izany bebe kokoa ho atolotra fotsiny Paris ary hijery dimy kely etsy ambany tanàna be olona.
Reims dia ny tanàna sy ny divay Champagne no faritra ary samy no tena tsara tarehy. Izany ity tranon'ny sasany amin'ireo malaza indrindra tanim-boaloboka eto amin'izao tontolo izao sy ny dia lavitra Azo antoka fa hanonitra ny rivo-piainana milamina. Raha toa ianao ka Champagne mpankafy, mandoa ny fitsidihana dia tsy maintsy. Ny faritra tsara tarehy dia mampino, fa mainka feno olona noho ny renivohi-pirenena. Raha mitoetra in Champagne, aza hadinoina ny maka tarihin'ny lakaly fitetezam-paritra ary mianatra bebe kokoa ny fomba Champagne atao.
Metz ho Reims Lamasinina
Luxembourg ho Reims Lamasinina
Lyon ho Reims Lamasinina
Lyon dia tsy milamina fialan-tsasatra toerana fa koa ny UNESCO World Heritage Site noho ny malaza rava romanina sy mahatalanjona tranombakoka. Raha toa ianao ka foodie, Lyon no iray amin'ireo toerana tsara indrindra mba hahazo ny sasany amin'ireo matsiro indrindra hanim-piny any Frantsa, Na dia aza hadinoina ny mitady torohevitra momba ny nitoetra salama raha miezaka sakafo vaovao any ivelany.
Ho an'ireo izay liana amin'ny maritrano, Lyon koa dia trano fonenany fiangonana Renaissance maromaro fa ho hitanao niparitaka manerana ny tanàna.
London mankany Lyon Highspeed Trains
Amsterdam ho any Lyon Lamasinina
Raha toa ianao liana amin'ny ditin-kazo manitra, Grasse no tsara toerana ho anao. Rehefa niaina ny efa milamina, tarehy eny an-dalambe, hahita ny tenanao te hiverina indray, ary indray. Grasse dia toerana tsara tarehy miorina manamorona ny frantsay sy Riviera, ny fomba tsara indrindra hampiaiky volana ny an-toerana eto dia hampihatra ny frantsay anao!!
Malaza ho tanàna faharoa lehibe indrindra any Frantsa, Marseille dia tanàna amoron-dranomasina miaraka amin'ny miavaka toetrandro. Ho hitanao ato Epic rava sy mahavariana centres kanto ny handao anao nampiantrano nandritra ny ora maro. Ho an'ireo mitady fialam-boly, Marseille no manaitra an-trano ny tora-pasika izay afaka handro amin'ny amin'ny mahafinaritra ranomasina. Marseille manome ny tsara indrindra na araka ny tontolo feno hetsika ara-kolontsaina ary koa ny tony tianao ho tony ao.
Matetika no heverina iray amin'ireo indrindra Frantsa tanàna underrated, Lille no tsy feno olona noho ny sasany tamin'ireo toerana frantsay malaza kokoa, fa mbola mitovy tsara tarehy. mpizaha tany afaka mandehandeha amin'ny lalana miolakolaka sy mankafy ny maro loko Architecture sy mitabataba rivotra iainana teny an-dalana. Fa tia zavakanto, ny Palace tsara Arts tranom-bakoka dia toerana tsy maintsy tsidihana satria ito no trano misy ny zava-kanto faharoa lehibe indrindra any Frantsa.
Rehefa mitsidika na nitsidika Frantsa antoka ny tsy hanapaka na dia iray akory amin'ny tanàna ambony! Rehefa tsy feno olona izy ireo, nifindra manodidina azy ireo dia ho ezaka, ary ianareo dia ho afaka ny hankafy ny toetra mampiavaka ny isan-tanàna. Zavatra iray ireo tanàna ireo rehetra no mitovy toerana tsara tarehy dia tsara tarehy sy – mazava ho azy – mahagaga sakafo, ary farany aza adino, tany Eoropa hampiofanana ny olona mandeha miaraka amin'ny Save A Train.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-less-crowded-cities-to-explore-in-france%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
I work as a part-time tour guide in Kent and blog about the experience. Her favorite weekend activity is a walking tour on the South West Coast of Bristol. She is also a strong advocate of a sustainable lifestyle and hopes to write a book about it someday. She lives with her parents and her Frenchie named Coco - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho